ကျွန်တော်လွတ်ကျခဲ့တဲ့မြို့တော်: HAPPY NEW YEAR မှာ ပြောချင်တဲ့ စကားတွေ ...
ရေးသားသူ - NayPhoneLatt at Monday, December 31, 2007
Congratulations Friend, and thank you for sharing the greatest New Year Wishes that I have ever read. Cheers!!! Keep it up...
ကာရံလေးရော အတွေးနဲ့ ရှင်းလင်းဖေါ်ပြချက်ပါကောင်းတဲ့ ပို့စ်လေးပဲ ယင်းဂလ်ိပ်စာသားတွေကို နာ့ယင်းဂလိပ်ဘလော့ထဲမသွားမယ်နော်
Every change won't be same what you want to gain ဆိုတာရယ် Your view can be changed according to your brain ဆိုတဲ့ စာသားလေးတွေ တသက်လုံးမှတ်ထားမယ် (ကျန်တာတွေလဲ ကောင်းပါတယ်လေနော်)
ကိုကျော်ရေ စာသားလေးရော အဓိပ္ပာယ်လေးပါ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ အဲဒီ့အတိုင်း ကျင့်ကြံနေထိုင် နိုင်ဖို့ပဲ လိုတယ်နော်။ နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ ကိုကျော်။ သဲတို့ မောင်နှမတွေအားလုံး ချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ အမြဲနေနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
အကိုရေ…Happy New Year ပို့စ်လေးက အရမ်းအဓိပ္ပါယ် ရှိပါတယ်။ နှစ်သစ်ကိုရောက်ပေမယ့် နှစ်ဟောင်းက အဖြစ်အပျက်တွေက ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ လိုက်ပါလာတာပါပဲ။ အကိုပြောဖူးသလို စိတ်တွေကို ပြန်သစ်လို့ မရသရွေ့ နှစ်သစ်တွေ နှစ်ဟောင်းတွေက ဘာမှမထူးခြားပါဘူး။ ဒါပေမယ့် နှစ်သစ်ရောက်ပြီ ဆိုတော့လဲ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အပြောင်းအလဲတွေ ဒီနှစ်ထဲမှာ ဖြစ်လာမလား ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်တော့ ပြန်ထားခွင့်ရှိတာပေါ့လေ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ၂၀၀၈ ကိုတော့ ဆုဝေတို့အားလုံး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ကြိုဆိုကြတာပေါ့နော်…။
kg dae fri di lo yae pi shin pya dar ma shi thay bu verry very good so dae kg dae sagar lay pyaw chin par dae
myanmar lo yae pi sagar pyaw chin par dae
myanmar lo type lo ma ya lo par
nout lae di htat kg dar lay doy yae par onn lar arr pay mae naw
ko ma yae dat tot yae dat tae thu ko arr pay ya mhar ah naw doe mhar tar wam shi par dae hote tay hote
မိမိနဲ့ ငါ ခဏခဏရန်ဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဦးကြီး .....